१३ वर्षपछि विदेशबाट फर्किँदा श्रीमानको ला”स भेटियो, छोराछोरी कहाँ छन् थाहा छैन ! – Life Nepali
झापाको मेची नगरमा एउटा अ नौ ठो किसिमको घ टना घटेको छ । केहि दिन अगाडी भिम राज लिम्बुलाई आफुनै काकाले ह त्या गरेर फा ले को थिए । श्रीमानको श व अस्पतालमा भएको बताईन् । १३ वर्ष परदेशमा पसिना बगाएर नेपाल फर्किदा न श्री मान न त छोरा नै भे टिए । कुवेदमा काम को सिसिलमा गएकी थिईन् ।
नेपालमा श्रीमानको ह त्या भएपछि नेपाल आ एकी छन् आफ्नो श्रीमानको ह त्या आफ्नै काका बाट भएको बताईन् । श्रीमानको मुख हे र्नलाई आफ्न तलाई हा र गु हार मा गेर नेपाल आइकी छन् श्री मानको का ग कि रि या गर्ने कु वेद काट घर र्फेकेको बताईन् । आफ्नतले अस्पतालमा श व राख्न मिदैन् भनेका थिए । आफुले बि न्ती बि साए नेपाल फर्केर घर बनाउन स पना अ धु रो भयो
मेरो श्रीमानलाई यस्तो भएको रशेछ मेरो घा टी मा पानी अ ड्के जस्तै भयो यता मेरो श्रीमानले ले यो सं सा र छो डि सकेका रहेन्छन् । श्रीमानसंग भेट नभएको ५ बर्ष पुगेको थियो । म आउदै छु भनेर श्रीमानलाई पैसा पठाएको थिए । कसैसंग म न मु टाब थिएन् मेरौ लागि मेरो श्रीमानले बाटो हेरेर ब सेका थिए तर आज मेरो श्रीमान नै भएको एउटा छो रो पनि म संग छै न्
छो रा पनि कता ह रा यो अहिले भेटिएको छैन् अब म क स्लो मुख हेरर बसु छोरो खोज्न ला ई धेरै को सि स गरे छोरो भे टिएको छैन् मेरो श्रीमान तिमी कहिले घर आउन्छौ एउटा कुरा सुनाउन्छु भन्थे तर कहिले भन्नु भएन् । मेरो श्रीमान त्यो कुरा के हो उसै संग गईसकोको छ । मेरो श्रीमान न्या य पाउन मेरै हा त बाट अ प रा धी लाई अ न्त्य गर्ने चा हान्छु।https://youtu.be/XykHcGERxQA
Previous “स्कूल ड्रेसमै यस्तो टिक-टक बनाएपछि रातारात भाइरल (हेर्नुहोस् भिडियो
Next यी नै हुन् ! टिकटक बाट महिनाको २ लाखभन्दा बढी कमाउने नेपाली युवा, यसरि घरमै बसी बसी कमाउन सकिन्छ (हेर्नुहोस भिडियो)